Moramora… mandeha ny ora | NewsMada
Moramora… mandeha ny ora
Betsaka ny zavatra tsara ananan’i Madagasikara, azo ambara, raha hiresaka ny mampiavaka azy amin’ny hafa. Miavosa lavitra, noho izany, koa anefa ny ratsy ary aleo tsy asiana fihatsarambelatsihy mihitsy ny fitanisana azy. Marina fa tsy isika no mitàna ny rambony, raha resahina ny fahantrana saingy angamba, hanatsara zavatra ny fampitahana amin’ireo firenena anjatony eo aloha.
Taratry ny fandrosoana ny fihatsaran’ny fiainan’ny mponina sy ny toeram-ponenany ary ny vola miditra aminy. Ekena fa mbola misy ny tsy manan-kisitrihana, mpatory an-dalana, ny tsy an’asa, sns, any amin’ireo firenena misandratra, toa an’i Brezila, i Arzantina, i Inda, sns. Saingy, ny eto amintsika kosa, efa tafahoatra sy tsy mifanaraka amin’ny 58 taona nahazoana fahaleovantena.
Ankoatra ny vola miditra sy ny fahazoana ireo filàna fototra (fitsaboana, fianarana, fialan-tsasatra, sns) ary ireo azo ambara ho efa filàna manaraka ny toetrandro, toy ny fampiasana teknolojia avo lenta, ny fivoaran’ny toe-tsaina ho mariky ny fandrosoana. Mampiavaka ny tany manan-karena ny fanajana ny fahadiovana. Toy ny mandeha ho azy mihitsy izany.
Ny mahagaga, tsy maintsy voretra ve rehefa mahantra ? Rakotra soratra ny tamboho sy ny elakela-trano, mandrara sy manafay ny fanaovana maloto. Tsy mampihontsina ny maro anefa izany. Ny atao ihany no atao. Toy izany koa ny fanariana fako eny amin’ny tatatra sy ny lakandrano rehetra eny. Iaraha-mahalala izao anefa ny vokatr’izany.
Tsy mahay mikojakoja fa vao mainka aza manimba sy tsy miraharaha, rehefa mahantra ? Ny marina, angamba, tsy nisasatra sy nifofotra ary tsy niezaka hanatsara ny fiainana, hany ka tsy mahatsapa ny hasarobidin’ireny fotodrafitrasa sy ny zavatra tsara voatra ireny. Zatra fiainana moramora… milamindamin-dratsy.
Na ny mpitondra na ny entina, toa samy tsy miraika fa « miraikiraiky ». Toy ny hazakazaka anefa ny fandrosoana ho an’ireo firenen-dehibe. Ny antsika kosa, mbola firenen’ny moramora.